बस्ने मन नै छैन मेरो देशमा : Sajha Network - Nepal's No. 1 Online News Portal
बस्ने मन नै छैन मेरो देशमा
November 27, 2018 मा प्रकाशित
-रवी किरण अधिकारी ।
हो बस्ने मन नै छैन मेरो देशमा । किनकि यहा कुनै शान्तिको बाटो देखिदैन, दिन दाहाडै बलात्कार गुन्डागर्दी घुसपेठ जातियताबाद कृपाबाद ठुलोबाद त सानोबाद, भ्रष्टाचार, अत्याचार कुनै शान्तिको अभिलासा दिलाएन सरकारले ।
हुन त यो अहिलेको रिति रिवाज होईन । यो रितिरिवाज त पन्च्यात कालदेखि नै थियो । त्यसबेला मिडियालाई छुट थिएन कि जनता सामु समाचार दिने जसले सरकारको बिरुद्ध समाचार छपाउथ्यो ।
त्यसको दिन पनि नजिक आउथ्यो सुलीमा चढ्न । कुनैबेला जनतालाई पढायो भने जनता बाठा हुन्छन भनेर स्कुल समेत बन्द गराउने सरकार पनि थिए । तर आज हामीले ति शब्दलाई ति कार्यलाई भुलेर पुरानो इतिहास ठिक छ भनेर सोच्न लागेका पनि छौ ।
हामीले कसको आडमा सरकार चलाएका छौ, त्यो पनि जनतालाई अब थाहा भैसक्यो । अहिलेका मिडियाहरुबाट पनि र जनताहरु शिक्षित भएका छन् । फेरी यो २१ सौ शताब्दी पनि हो।
अहिले धेरै सोसल मिडियाहरुको विकास पनि भएको छ । जनता पहिलाको जस्तो छैनन, अब यस्तो कानुन बनाउनु पर्यो, छोराले गल्ति गर्यो छोरा भागेर अन्यत्र गयो भने बुवालाई फासी दिने, बुवाले गल्ति गर्यो बुवा भागेर अन्यत्र गयो भने छोरालाई फासी दिने।
आमाले गल्ति गर्यो आमा भागेर अन्यत्र गयो छोरिलाई फासी दिने, छोरिले गल्ति गर्यो र भागेर अन्यत्र गयो आमालाई फासी दिने गर्यो भने सबै ठिक ठाउँमा आउछन, किनकि मानिसमा डर भन्ने चिजको बिकास हुन्छ ।
मैले गल्ति गरे मेरो बुवालाई फासी हुन्छ, बुवाले गल्ति मेरो छोरालाइ फासी हुन्छ। छोरिले गल्ति गरे मेरो आमालाइ फासी हुन्छ । यस्तो सोच मान्छेमा हुन्छ र मान्छेले गल्ति नै गर्दैन ।
उसको दिमागमा यो हुन्छ कि मैले गल्ति गरे मेरो खान्दान बर्बाद हुन्छ भन्ने सोच उसको दिमागमा हुन्छ र उसले गल्ति गर्दैन । यस्ता केस अब दिनमा हजार निस्किन छन् । कसैले रोक्न सक्दैन यो काम किन यो काम भनेको अबसरबादी काम हो कुनबेला उसले गर्छ त्यो थाहा हुदैन ।
त्यसैले अब यो जेल हालेर सरकारको जनताको पसिनाको रासन पानि माथि खेलवाड गर्ने यति जेलरहरुलाइ खुवाउने रासनले गरिब मुक्त हुन्छ । गल्ति गर्नेलाइ सिधा सुट गर्ने कानुन नहुदासम्म यो निर्मला काण्ड पवित्रा गीता काण्ड रमिता काण्ड खुन्तुरी काण्ड बुडी काण्ड जवानी काण्ड बुढेस कालको काण्ड कुखरे बैसको काण्ड, एक अर्काका छोरा छोरि माथि लगाउने नजर काण्ड यस्ता घटना घटीनै रहने छन् ।
अब त झन् सजिलो भो हातमा मोबाइल इन्टरनेटको सुबिधाले पनि यस्ता काण्डहरु धेरै भएका छन । यीनी सुबिधालाई गलत रुपमा प्रयोग गर्दै धरै काण्डहरु घटेका पनि छन । त्यसैले सरकारले अब यो कानुन बनाउदा बितिकै सबैका कान खडा भएका हुन्छन । बिहान निस्किएको छोरा साझसम्म घर नआउदा बुवा नसुतोस ।
बिहान निसकेकी छोरि साझ घर नआउदा सम्म आमा नसुतोस । बिहान निसकिएको बुवा साझ घर नआउदा सम्म छोरा नसुतोस । अब हेर्नुस अनि कसरी हुन्छ काण्ड ? काण्ड त उसको घरमै हुन्छ अनि किन गर्छ उसले बाहिर काण्ड ।
उसले काण्ड गर्ने अरुलाई दु:ख दिने पुलिसले गरेन सरकारले गरेन भनेर हामी दोष दिन्छौ । हामी कति मुर्ख ! घरमा मुर्ख छोरा राख्ने हामी, घरमा छोरी नराम्रो राख्ने हामी, घरमा बुवा नराम्रो राख्ने हामि अनि दोष सरकारलाई, गल्ती त हाम्रो घरबाट भाको छ ।
पहिला मुहान सफा गरौ । जब मुहान सफा छैन अनि दोष अरुलाई दिने, यस्तो गर्यो भने पुलिसको पनि काम छैन त्यो पुलिसको तलबबाट गरिब मुक्त देश हुन्छ । त्यो पैसाले कृषकलाई मलजल बाटो सबै विकास हुन्छ ।
यो कानुन लगाउदा बितिकै जो कोहि पनि बिहान घरबाट निस्किएपछी साझ घरमा नआउदा सम्म उसकै परिवार सुत्दैन । अनि किन चाहियो पुलिस किन दिने दोष अरुलाई मेरो बच्चा आएन स्कुलबाट कलेजबाट उ आउछ गजबले । त्यसैले हामीलाई थाहा हुन्छ मेरो छोरा ठिक छ कि छैन।
हामीलाई थाहा हुन्छ हल्का-हल्का मेरो छोरी ठिक कि छैन, हामीलाई थाहा हुन्छ मेरो बुवाको आचरण ठिक छैन, हामीलाई थाहा हुन्छ मेरो श्रीमतीको आचरण ठिक छैन, त्यो थाहा त हामीलाइ मात्रै थाहा छ । अनि हामी अरुलाई दोष दिने पुलिसले गरेन सरकारले गरेन भनेर ।
अब सरकारले यो कानुन लागु गर्दा बितिकै सबै काण्ड खत्तम हुन्छ । साझ सम्म घर नआउदा त्यो परिवार सुत्दैन किन उसको छोरा आको छैन । किन आएन त्यो त्यहीबाट थाहा लाग्छ कि उसले गलत काम गरेर आएन त्यो परिवार रात भरी खोजे खोज्छ न खोजे भोलि फासीमा चड्छ सकिगो कुरो ।
यस्तो गर्यो भने सारा गुन्डा-गर्दी बलात्कारी सबै ठिक हुन्छन त्यही नियम भ्रष्टाचारमा लागु हुन्छ । बुवाले भ्रष्टाचार गर्यो छोरालाइ जिन्दगि भरि बन्दगी राखेर काममा लगाउने। छोराले भ्रष्टाचार गर्यो बुवालाइ जिन्दगि भरि बन्दगी राखेर काममा लगाउने, छोरीले भ्रष्टाचार गर्यो आमालाई जिन्दगि भरि बन्दगी राखेर काममा लगाउने ।
अब यस्तो गर्यो भने कस्ले गर्ने गलत काम कसको हिम्मत हुन्छ । त्यसैले अब कानुन बलियो बनाऊ सबै ठिक हुन्छ । यहि गल्फमा हेर्नुस कतै सुन्नु भएको छ । गलत काम गरेको ? हाम्रो देशमा सबै रातो खबर आउछ ।
देश हाम्रो हरियो तर खबर भने रातो आउछ । त्यो रातोलाई हटाउने अब यही उपाय छ, बाकी छैन देश हरियो भएर हुदैन कानुन हरियो हुनुपर्यो । निर्मला काण्ड जस्ता कहिले हुदैनन । उसको बुवा नै पिर चिन्ताले आज पागल भए उनलाई न्यायको खाचो छ ।
सरकारमा कानुन गतिलो छैन सबै गरिब मारा लुटेरा छन् यीनैले मस्ती गरेका छन् । सबै फटाहाहरुको राज छ, गरिबको कहिँ केहि सुनुवाई छैन ।
भोलि मेरो देश यस्तो सम्पन्नताले भरिपूर्ण बनोस कि विश्वको कुनै देश त्यस्तो नहोस, र सारा नेपालीले भनुन “हाम्रो देश नेपाल, हामी नेपाली” । जय देश !